Nahoana no nanambady Dia Young: From My Wife's Perspective — Trip LEE - OFISIALY SITE
Nahoana no nanambady Dia Young: Avy amin'ny vadiko ny fomba fijery
Tokony ho iray volana lasa izay dia nanoratra bilaogy milaza ry namana antony izany nanambady tanora. Tena nampahery ahy ny valinteny avy amin'ny rehetra izay mamaky azy io sy ny fivavako no fa ny Tompo dia hanampy antsika mba hieritreritra bebe kokoa ara-Baiboly momba ny fanambadiana. Raha toa ka tsy hahazo ny hamaky izany ato ny lahatsoratra nadika jereo izany eto: Nahoana aho Hanambady Dia Young?
Ary rehefa afaka izany ry namana maro nanampy ahy ary nilaza tamiko ny fomba hanampy izany ho azy ireo, Nihevitra aho fa ho toy hanampy aoka kosa ny vadiko, Jessica, mamaly io fanontaniana io avy ny fomba fijeriny. Koa eto dia. Inona no nanao ny vadiko manapa-kevitra ny hanambady ka tanora? Hoy izy…
1. Hitako Nohazavain'ny mpanompon'Andriamanitra iray
Rehefa nihaona voalohany Trip, Tsy mbola mikasa ny hanambady amin'ny fotoana rehetra tsy ho ela. Fa hatramin'ny niandohany fotoana nivoaka, Fantatro nisy zavatra hafa momba azy. Izy no liana mikasika ny filazantsara amin'ny fomba izay tsy mbola hitako teo anatrehan'i amin'ny lehilahy ny taona. Izaho koa tsy nahita olona toy izany eo amin'ny fomba fijery hendry mampiaraka. Noho ny maha-mpianatra alohan'ny oniversite fantany tsara ny zavatra nataony fa ny fifandraisana araka an'Andriamanitra tokony hijery toy ny ary izy tsy vonona ny marimaritra iraisana fa.
Miaiky aho fa niady mafy tamin'ny izany tamin'ny voalohany. Dia toa lehibe loatra sy be loatra. Fa rehefa mandeha ny fotoana dia nanomboka ny Tompo mba hampiseho ahy ny fahendrena ao amin'ny fifandraisana amin'ny fiaraha-monina tototry, ara-nofo sy ara-pihetsehampo fahadiovana, ary niaraka fa ny tanjon'ny fanambadiana. Raha toa ianao tsy vonona ny hanambady, dia ny azo inoana fa tsy hevitra tsara ny anjara tsirairay fo hafa. Ao amin'ny Tonon-kiran'i Solomona nampitandrina isika tsy mba mamoha ny fitiavana eo anatrehan'i ny fotoana. Amin'ny maha vehivavy, -pihetseham-po isika, dia tena olombelona koa raha nihaona tamin'ny lehilahy iray aho izay liana nitarika ny fifandraisantsika amin 'ny fomba izay miaro ny foko, Fantatro fa nahita ny mpiandry :)
2. Nampirisihina isika 'ny olona eo amin'ny fiainantsika
Nandritra ny fiarahana dia nangataka ny olona sasany mba ho akaiky anjara amin'ny ny fifandraisantsika. Izy ireo hitandrina antsika tompon 'andraikitra amin' ny faritra sy hanampy antsika handray fanapahan-kevitra momba ny fifandraisantsika. Izahay koa mba niakatra tamin'ny alalan'ny toro hevitra mialohan'ny fanambadiana talohan'ny mihitsy aza natao anjara. Izao zavatra roa Izao navela ho antsika mba hikatsaka ny fahendrena ny be taona, hendry rahalahy sy anabavy momba na na tsy izany hevitra tsara ny hanambady. Andriamanitra dia nanome antsika pasitora sy ny mpampianatra avy amin'ny fiangonana eo an-toerana noho ny antony. Manampy antsika hieritreritra ny alalan 'ny fanapahan-kevitra amim-pahendrena, ary hanome fomba fijery araka an'Andriamanitra ivelany. Fifandraisana izay natao amin'ny fitokana-monina no mametraka ny mpivady amin'ny lehibe mety ho fahotana ka tsy hendry fanapahan-kevitra. Aho mampiaraka tena handrisika ny mpivady mba manana mpino hafa avy amin'ny fiaraha-monina anjara akaiky ny fifandraisana.
3. Nasehon 'ny Tompo ahy ny hatsaran'ny fanambadiana
Amin'ny maha-freshman tany amin'ny oniversite aho dia nanana ny zavatra Tiako ny miantso Superwoman Syndrome. Be aho mahaleo tena sy ny asa entin'ny, tena manohitra ny hevitra ny mila olona. Tsy mino aho misy zavatra tsy mety amin'ny maha mahaleotena na asa entin'ny, fa tao am-poko izany mihoatra noho izany. Tsinontsinona aho ny nanaovan'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy. Aho dia mbola tsy nilaza fa mafy, fa raha ny marina aho, Aho kivy amin'ny zavatra izay noheveriko ny Baiboly maintsy momba ny vehivavy. Izahay malemy kokoa, tsy afaka mampianatra, tsy afaka mitarika, isika tsy ny lohan'ny ny ankohonany, ary ny tena toerana tena, isika mba manana fanahy malemy sady miadana. Nihevitra aho nanana na inona na inona aho fa ny fanahy malemy sady miadana ary Izaho tsy te hanova ny toetrako. Rehetra ireo nitarika eritreritra ahy ny mieritreritra fa ny fanambadiana dia zavatra izay mihazona ahy indray. Tsy mety hisakana ahy tsy nanenjika ny asa rehetra nanana nofy aho ary indray andro any aho hiafara amin'ny 10 ary ny antsasaky ny zaza eo amin'ny toeram-pambolena any ho any.
Soa ihany, nandritra ny taona maro ny Tompo dia nampianatra ahy ary nampiseho ahy ny zavatra tena mijery izany ho toy ny vehivavy araka an'Andriamanitra. Ny hoe ny vehivavy tia an'Andriamanitra dia tsy izay voafaritra araka izay ianao na tsy manao. Fantatro be dia be ny vehivavy tia an'Andriamanitra izay manompo amim-pahatokiana ny Tompo ao amin'ny fikambanana sy ny asa tsy tambo isaina ny vehivavy izay manompo ny zanany sy ny vadiny amim-pahatokiana ao an-trano. Ara-baiboly momba ny maha-vehivavy dia fahatakarana ny anjara toerana tsy manam-paharoa ho antsika vehivavy sy tia ny hatsaran-tarehy ny famolavolana Andriamanitra.
Amin'ny maha-vehivavy manambady dia nianatra zavatra maro momba ny dikan'ny hoe ho an'Andriamanitra ny vehivavy ary tsy mahatsiaro ho nofatorana rojo vy teo amin'ny vadiko na ny fanambadiana. Ny nanaovan'Andriamanitra ny fanambadiana noho ny tsara sy ny voninahiny. Ny fahafantarana sy ny finoana izay nanome ahy ilay fahatokiana mba hanambady any amin'ny taona 22. Roa taona sy tapany tatỳ aoriana, Tsy Misy zavatra hanenenanao, ary izaho ihany no mivavaka fa ny Tompo dia mbola hitahy ny fanambadiana.
Jdharden1 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:53 aho • navalin'i
Izany no mahavariana, ahoana no afaka manoratra ny tantaram-pitiavana tsara indrindra ho an'ireo izay manolotra ny penina ho azy. Misaotra anao Jessica, Tena nila izany. Izany dia mampirisika ahy ho toy ny antitra 16yr ny manaiky an'Andriamanitra sy avelao ho azy koa ny lalana amin'ny fitiavako fiainako. hotahian'andriamanitra anie ianao.
Jannon Fitzpatrick • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:53 aho • navalin'i
TIAKO ITY!! Mpitandrina ny tanora izahay amin'ny fiangonana kely iray ary milaza foana ny tanora, “Misy zavatra roa ihany izay hataonao ao amin'ny fifandraisana… 1) hanambady 2) Misaraka. Ny fandikana ny maharary sy miteraka entana, ka raha tsy vonona ny hanambady, fa tsy tsara indrindra mba hanomboka amin'ny fifandraisana.” (Tsy hoe tsy hitombo ho vonona ho amin'ny fanambadiana ao amin'ny fifandraisana, indrindra aho fa miresaka amin'ny 13-16 yr ankizy.) Manomboka ny ankamaroan'ny olona ny mieritreritra azy io fifandraisana dia ho kely, shortlived, zavatra mahafinaritra. Fihetseham-po anefa hampivelatra, ianao latsaka ao fahotana, ary avy eo fa sarotra kokoa noho ny hatramin'izay mba miala. Raha te hiaro ny fo nomen'Andriamanitra antsika ho sarobidy, ary mandehana amin'ny fifandraisana avy amin'io fomba fijery, ny fomba fijery izany nifarana tao fanambadiana ho an'ny lehilahy na vehivavy araka an'Andriamanitra, ho lavitra isika tsy hanisy ratsy sy torotoro ny fotoana izay lehilahy na vehivavy araka an'Andriamanitra Andriamanitra ho antsika avy manodidina! Misaotra ny fizarana!!!
Demonslayer4god777 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:54 aho • navalin'i
Tena faly aho no voakitika ny rohy Tohin'ny lahatsoratra. Izaho dia 25 ary izaho sy ny vadiko no nivady efa ho 5 taona. ankehitriny, Izaho no voalohany, mba hilaza ny olona rehetra fa Andriamanitra no antony manambady. Toa anao, amin'ny 21, Dia tsy mitady ary tsy te-bady, hitifitra Tsy tiako sipa. 2007 dia ny taona tanteraka Andriamanitra nanova ny fiainako. Tamin'ny volana Janoary I vao nahita hoe inona no tena tiany dia ny fifandraisana fa tsy fivavahana izany any amin'ny avo aho(ara-panahy) ary ny zotom-po toy ny na inona na inona aho, efa hatramin'izay niainany talohan'ny. Next zavatra fantatro iray volana tatỳ aoriana dia nanambady aho. Crazy Fantatro. Fa inona no lazaiko…Andriamanitra nilaza antsika hanao izany. Ary dimy taona taty aoriana, izahay dia mbola miara-, ary miara-mitombo ao amin'i Kristy. ankehitriny, Tsy tiako tsy manoro hevitra ny olona mba hanao izany ho haingana tahaka izay efa nataontsika. Fa tsy tiako tsy manoro hevitra hamelezana azy, raha mahatsapa ho tarihin'ny Andriamanitra, ary mivavaka sy fifadian-kanina. Mivavaka aho fa mbola tsy mitombo ny fanambadiana fa hampahery azy. Mivavaka aho mba ny fifankatiavana ihany koa ny mbola mitombo. I hahasitrana na inona na inona, anyperson, misy fanahy, izay miezaka ny hizara anao. Mivavaka aho mba ianao nitso-drano amin'ny lehibe fahaizana mifampiresaka, ary nitombo faharetana. Andriamanitra anie hiaro anao, amin'ny anaran'i Jesosy.
Matt Novak • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:54 aho • navalin'i
Misaotra ry zalahy fa mampiasa ny fiarahana alohan'ny sy ny fanambadiana ho toy ny ohatra sy ny fampaherezana ho an'ny tanora tokan-tena sy ny tanora mpivady. Misaotra nanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanambadiana, ary ny fizarana ny fahendrenao sy ny traikefa amin'ny tenan'i Kristy, izay raha ny marina ny vadin'i Kristy, toy izany koa manome antsika Mombamomba ny mpanoratra fomba tokony hiaina tahaka ny ampakarina Kristy. Miderà an'Andriamanitra noho ny asa nataony eo amin'ny fiainanareo mba matotra anao na amin'ny fahatanorana toy izany.
Ariep17 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:54 aho • navalin'i
Wow izany dia tena lehibe! Mitovy amin'ny 20 y.o. vahoakan'i mijery ahy tahaka ny im very saina noho ny maniry hanambady. Tiako ny mahita ny sasany fanitarana ny zavatra tianao ambara amin'ny “fihetseham-po madio.” Tiako ny trasparency koa ao ny zavatra nolazainao. Andriamanitra anie hitahy yall
Philipns2 5 11 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:55 aho • navalin'i
ankapobeny, raha hoy izy “madio ara-pihetsehampo” izy no miresaka bebe kokoa momba tsy efa ao an-tsainao miezaka hanambady ny lehilahy na ny mieritreritra fa ianao no “ihany” ny satria ianao miaraka. Mety hitarika ho amin'ny fahotana hafa toy ny eritreritra, “firaisana ara-nofo manonofinofy, filan'ny,etc.” Fantatrao-pihetseham-po ianao, raha ny fahitana maloto izany olona hafa ny toetra no tena nanakorontana mba hataonao sampy ny fifandraisana ao an-tsaina ihany. Izany no mahatonga Ohabolana 4:23 no zava-dehibe ny miaina amin'ny,indrindra ho toy ny vehivavy, satria isika, toy ny efa voalaza, “pihetseham-po” zavaboary.
Ariep17 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:55 aho • navalin'i
Nahazo anareo aho Fa isaorana. Ny tena tsara. Izaho efa niady mafy amin'izany. Izany ihany no mitondra any ilaina loza
Kerai Riddle • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:56 aho • navalin'i
tiako ity!!!!!!!!! Indraindray dia toa manadino fa youre tsy irery, satria maro ny ankamaroany namanao manodidina anao toa mihevitra ny “mitsambikina ny basy” maro ny olona tamiko fa wasnt vonona sy im tanora loatra, Tena mino aho fa izao no efa miandry ahy. Natahotra aho tao an-tsaiko ny andro manaraka, satria tsy vitan'ny hoe mahazo manambady maraina koa teo amin'ny taona 18 Izaho koa dia nanambady lehilahy fantatro Tsy ampy herintaona, ary izy ihany no 19. Izahay dia nanana fifandraisana vetivety toy ny fanahintsika dia voatendry hiaraka, Izaho tia azy kokoa izao noho izaho mbola manana hes ny mpiara-miasa ho amin'ny fiainana ary wouldnt hanova izany na inona na inona. Niara-nivavaka izahay sy niara-nandeha niangona nanambady ary nanana ny ankizy iray miara-are..It ankehitriny eto isika dia ho 3 taona tamin'ny Febroary ary mbola tsy manenina fa nanao hetsika ity :-) Andriamanitra efa nitahy soa ho ahy ny olona.. Ny voadiko midika izao tontolo izao ho ahy, ary izaho wouldnt handrava azy ireo.. Misaotra noho ny famoahana izany foana izany tiako tanora ny fitiavana… Zara raha mahita ianao ve mpivady till farany fahafatesana fa miezaka ny ho faty fa ny mpivady till no nampisaraka ny fisaraham-panambadiana dia tsy safidy!!
Adrienne Kelly • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:57 aho • navalin'i
Andriamanitra anie hitahy anao roa. Tokoa izy dia satria natoky Azy sy ny drafitra masina ho an'ny lahy / vavy fifandraisana ka tonga tany fanekempihavanana fifanarahana fa ho manome voninahitra Azy sy samy ho amin'ny fiainana. Dia mirehareha aho.
M.A.R.V. • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:57 aho • navalin'i
tia azy!! Ay yall tokony Vehivavy-up ny Fahatakarana ny Hevitry maha-vehivavy ara-baiboly sy ny tenanao wifes manao izany :)
Louib2001 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:57 aho • navalin'i
Miderà ny Tompo ho anao sy ny mahafinaritra rahalahy vadin'ny fahatanoranao. Mivavaka aho mba handatsaka ny Tompo sitraka foana mandritra ny fiainanao, satria nanaiky ny teniny. Izaho dia 28 ary efa nanambady izao fa efa ho roa taona sy ny vadiko, ary izaho manana fanambadiana sambatra sy mahafinaritra 10 misy kalalao zaza taloha. Foana aho te hanambady tanora, Mino aho fa tsy maka fotoana dia mbola ho ahy mandra-pahatongan'ny nitondran'i Jehovah ny zava-tsoa efa ho 5 taona maro lasa izay (mba ho marina isika nihaona tamin'ny andro natao ateraka indray 31 Dec 2006). Ary izaho tsy nahalala isika izay voatendry hiaraka tahaka ny nanesorako azy ho toy ny olon-tsotra avy amin'ny fiangonana rahavavy. Mifantoka ihany koa aho teo amin'ny fitomboana ara-panahy, fa telo taona lasa izay nanokatra ny masoko sy ny sisa rehefa milaza ny tantara.
Ao Satana fandaharam-potoana ho an'ny olona tsy manambady, ka dia miaina ao anatin'ny fahotana ary efa fantatrao izay hitranga. Moa ve isika nijery ny tahan'ny fisaraham-panambadiana any amin'ny tena amin'izao fotoana izao? Ahoana ny rahalahy sy anabavy ao amin'ny fiangonana fornicating, noho ny zavatra fiarahamonina baikon'ny.
Raha mijery ny fomba ny tanàn-dehibe dia feno herisetra tanora ankehitriny, no maka fotoana mba hieritreritra ny sasany amin'ireo antony fototra mahatonga? Ny fotoana fifanakalozana araka an'Andriamanitra ny olona noho ny boribory ISM soatoavina izany rehetra izany dia voafafy teny masina. Na ray aman-dreny kristianina dia mampiroborobo ny tsy fahalalana boribory ISM amin'ny nanakivy ny zanany tsy hanambady tanora (amin'ny taona maha-olana mazava ho azy fa). Ny antony dia Averiko”tokony hahazo fianarana, Angamba rehefa hamita ny tomponareo, ary manana asa mendrika, dia manomboka mieritreritra momba ny fanambadiana”. Izany no feo hendry tsy izany ? Ary inona no mitranga rehefa ny ankizy kristianina no mandeha ny oniversite ary avy eo dia mihetsiketsika ao amin'ny ankizilahy / zazavavy namana izay na Kristianina, na tsy?
Aza mahazo ahy ratsy(izany fotsiny ny sasany amin'ireo teny izany dia efa tonga manerana), satria ny fanambarana etsy ambony dia tsy ampiharina amin'ny rehetra. Ny fanabeazana no tena zava-dehibe tahaka ny mahazo fahalalana noho ny asa tsirairay mba hahafahan'izy ireo miasa, ary manome ho an'ny fianakavian'izy ireo hoavy sns, fa ny fanambadiana fanaony intsony ny anankiray avy nandimby amin'ny faritra na inona na inona eo amin'ny fiainana iray misafidy ny hanaraka, Raha ny zava-misy fampakaram-bady tao ankapobeny mampiroborobo ny fitomboan'ny asa fanompoana lehibe i.e, tsara olona mahantra, harena sy ny lisitra mitohy. Tsarovy ny lasa nofo iray ihany izy roa, ary mety hanenjika 10 000 Wow, izany dia midika fa amin'ny fifanarahana na inona na inona izy ireo mangataka amin'Andriamanitra amim-pahatokiana izy ireo, dia tonga, awesome…..
In akaiky aho, Te hanolotra fomba isika Kristianina fa manomboka mampianatra ny zanakay mbola kely teo amin'ny maha zava-dehibe ny voalohany velona an'Andriamanitra sy faharoa ny maha zava-dehibe ny fanambadiana( ho an 'ireo izay efa nomena ny fanomezana) ka dia mitombo te hampifaly an'Andriamanitra ao amin'io faritra io. Indray mandeha tsara indray nanao ny rahalahiko ary ho an'izay rehetra fiainana ny tenin 'Andriamanitra. Stay voatahy.
Iwantstate01 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:58 aho • navalin'i
Jessica, Afaka mizara ny sasany amin'ireo zava-mahasoa Trip mandritra ny fiarahana no hiambina ny fonao-pihetseham-po. Azoko tsara ny fahadiovana ara-batana mametraka fetra. Fa inona no saika mitovy fihetseham-po ao amin'ny faritra?
Purposedrivenjc • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:58 aho • navalin'i
nanome ahy izany toe-tsaina vaovao ao amin'ny fanambadiana, Misaotra voaloboka
Kory Hagler • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:58 aho • navalin'i
Ny foko tena ampirisihina, tena tsara tarehy
Robert Rivera • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:59 aho • navalin'i
Beautiful!! Andriamanitra anie hitahy anareo ry zalahy!! tena nampahery…
Punchyko • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:59 aho • navalin'i
Wow!!! zavatra tsara, Misaotra be dia be noho ny famoahana bilaogy ity! Grace&fiadanana 0 =)
Katherine2c • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:59 aho • navalin'i
Izany no tokony hamaky izany!!! Misaotra anao!! I miady amin'ny zavatra indray mandeha, ary niady mafy tamin'ny Te hanome voninahitra ny Tompo sy ny vadiko!!!! Dia lazaina, Dia mbola miezaka ny ho vady fa P31!!! Misaotra anao!!!
Paul WenChih Anibal • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:59 aho • navalin'i
Na inona na inona tokony manao mendrika hanao tsara kokoa amin'ny synergistic mpiara-miasa. … Noho izany dia manoratra: http://mentoringmarriages.word…
Misaotra noho ny lahatsoratra.
ChosenV • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:00 aho • navalin'i
Tena misaotra an'Andriamanitra aho noho ny bilaoginy. Rehefa avy namaky azy io ho ny 1 andro aho Andriamanitra wow'd amin'ny asa. Telo volana nidina ny tsipika mamaky izany indray aho ary mbola wow'd aho. Aho 22 taona vavy sy ny marraige “mananontanona”, ny bilaogy dia trully panahy. Mivavaka aho fa ny lehilahy izany ho toy Andriamanitra noroahina toy ny Trip dia eo amin'ny fanatanterahana ny andraikiny amin'ny maha olona eo amin'ny fifandraisana. Andriamanitra anie hitahy anao:-)
Chelster • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:00 aho • navalin'i
Ao amin'ny Up Man, NY, roa volana lasa izay, Jess nilaza fa ny azy Trip “mandrakotra,” ary eto dia niresaka momba ny fomba nampiasaina ho “superwoman,” fa tonga mba hianatra ny zavatra araka an'Andriamanitra (manaiky) vehivavy azy dia tokony hitovy.
Afaka na na izy roa ianareo miteny kely manokana momba ny zavatra inoanao ny hevitra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy ny andraikitra ao amin'ny fanambadiana? Y'all dia fitahiana!!
Nicole Rose Munhawa • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:00 aho • navalin'i
Tena mihevitra ny tantara dia tena tsara. Samy ianao azon'izy ny hatsaran 'ny fanomezana ny fanambadiana sy ianao tena aingam-panahy ahy. Arahabaina eo amin'ny fanambadiana sy ny Mivavaka aho mba ho manafintohina ny fitiavana ho zaraina eo aminareo. Dia faly ho anareo
Kayla_brown_1 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:00 aho • navalin'i
Nahoana cant Hitako fa :(
Godgiven51 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:01 aho • navalin'i
Fomba fijery toy izany ny olon-kendry,mivady no nivady 5 taona ary izaho koa ao amin'ny Filazantsara saha nahatapaka ranjo hop izahay,ny foana mahatahotra ny manambady azy ao amin'ny takona izany mivavaka rehefa mandeha,ianareo vehivavy milalao anjara manan-danja eo amin'ny fiainantsika,foana manao izay ya doin sis!
Iolene_Branch • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:01 aho • navalin'i
Dia nataony teny an-dalana aho mba ho tsara kokoa ny vehivavy Kristy tamin'ny fiandohan'ny 2011 ka tsy maintsy hoe efa tonga lavitra indrindra fomba ary izaho tena mirehareha ny tenako. Nandritra ny dia Andriamanitra nametraka lehilahy sambatra amin'ny lalana sy ny mamaky ity bilaogy ity dia tena nilalao ny anjara toy ny famantarana farany ilaina amin'ny fivavahako.
Izaho koa dia tsy nanana fikasany mitady ny olona ny mandany ny sisa ny aiko amin'ny amin'ny 20 taona, fa eto aho, ary ity bilaogy ity Tena mampahery. Ho ahy mba hitsangana eo anilan'ikaky azy tao ny ezaka rehetra sy ny vehivavy ho Andriamanitra no namorona ahy ho ary ho araka ny lanivoany araka izay Mamolavola Azy ho ilay olona dia tokony ho.
Misaotra noho izany. Tena mankasitraka azy io no :)
Arnold Mofor • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:01 aho • navalin'i
Whao, Trip sy Jessica! Ianao no tena tsy mahay lavitra ny lesona dia nahatratra-Izaho ao Kamerona. Izaho dia 25 yr-antitra, ary vao haingana naka andro amin'ny fotoana maharitra amin'Andriamanitra mba hitady an'Andriamanitra momba ny ho avy mpiara-miasa. Dia niakatra tamin'ny lisitra / Vavaka teboka lisitry ny karazana vehivavy no te-hanambady daty sy ny farany. Avy eo dia nisy andro taty aoriana dia nihaona ny bilaogy. Mino aho fa Andriamanitra dia manomana ahy amin'ny fomba manokana. Izany no vadiko ny lisitra / vavaka hevitra lisitra:
Arnold vadin'i lisitra / VAVAKA HEVITRA LIST
ireo toetra tahaka ny HERY
Feno fanoloran-tena sy ny fitomboan'ny Kristianina
My mety Mpanampy
Manaja ny ray aman-dreniny, ny fianakaviany, ny fahefana sy ny ahy eto anatrehako sy ny tsy fisian'ny
Mpiara-miasa tamiko teo amin'ny fanompoana
Manaiky amin'ny zavatra rehetra
Manana fanahy malemy sady miadana
Nizara mitovy hevitra, tolona, fanaintainana, tsy misy zava-miafina
Tsy maniry ivelany akanjo tsara tarehy-, firavaka, Hair Styles
Manan-tsaina sy malala-tanana
Mahatonga ahy maniry ny hiasa tena mafy
Angela Johnson • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:01 aho • navalin'i
Inona no fitahiana samy Ianao! Foana fitandremana On niaraka taminy! Tsy Olana…..Ever! Nivady tanora aho, fa raha tsy misy ny fahendrena azy sy ny olon-kafa izay tarihin'ny Fanahy mba hamporisihana antsika hitady azy aloha……Tsy maintsy milaza fa na iza na iza mifidy ny lalany ho Nametraka azy ireo tenanareo mba handray ny Drafitra ho azy ireo fa tsy ny drafitra ho an'ny tenany izay lehibe lavitra noho ny zavatra afaka mandrakizay isika “mieritreritra” ho an'ny tenantsika….Matokia azy!:) Aho mandeha amin'ny finoana fa tsy Amin'ny Hitan'ny Maso (2 Korintiana 5:7) Na matiko mihitsy ny tena……Raha tsy Izy dia tsy nahita zavatra tsara. Misaotra Anao Jehovah nandefa ny Fanahy Masina, Izay mampionona sy mitarika ahy. Jesosy no Tompo! ( Mbola nanambady aho ary izahay Samy <3 Ny Tompo!) Stay Sambatra!:) be <3 sy Fiadanana!:) Tena Inspiring anareo mirahalahy mba efa nandefa, Misaotra indrindra anao!:)
aneetarh • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:03 aho • navalin'i
misaotra U be Jessica,hay tanisana dia tena fantatro tsara mila TV. Andriamanitra rilly bls U ry zalahy. Aho 21, ao amin'ny relatnshp araka an'Andriamanitra N sipako Tian'i 2 hanambady ASAP. Dia tsy azo antoka raha toa ka misy hevitra Gud, izaho nahatsapa dia tsy matotra enuf bt Misaotra an'Andriamanitra 4 hay tanisana,raha izany davaky ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka aho misoratra anarana 2 izany
Rchllnndreher • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:03 aho • navalin'i
WOW ny antony mahatonga anao hahazo marride dia mitovy amin'ny ahy ireo ary inona no mbola ho ahy mino aho nanao safidy tsara aho, koa dia nahatsapa Andriamanitra nanao hoe: izao no indray izao no andro hamotsotra ny lasa ihany ny mpitandrina didnt hanaiky izay nanao azy mafy safidy amin'ny fomba hafa noho izaho nanaraka Andriamanitra. aho 22 ary vao nivady 2 mo lasa izay. Mety ho fotoana fohy, fa Andriamanitra dia miara-mitombo antsika sy mampianatra antsika be dia be(ho ahy ny fomba hanokafana ny ho malefaka sy ny vehivavy ho toy ny Andriamanitra no namorona ahy ho) Tena awsome namaky izany ary te-hisaotra anao noho ny fandraisany ny fotoana hanoratana izany. Andriamanitra anie hitahy anao sy ny ankohonanao!
Rachel Wright • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:03 aho • navalin'i
Ya'll fijoroana ho vavolombelona dia toy izany awesome! Izany dia Mampahery ny mandre fa ya'll ka afaka hanambady tanora. Izaho no hanambady izany tamin'ny fahavaratra taona 21 ary Andriamanitra efa nitahy antsika amin'ny fomba maro, ary mbola velively mampitolagaga antsika sy hitahy antsika! Misaotra anao indray avy any, dia ny anareo ho mankahery ireo bilaogy!
Dfletcher812 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:03 aho • navalin'i
I tanteraka Mifanaraka. Nanambady aho tamin'ny taona 18. Eny zazakely aho fa, ny Tompo niteny tamiko ary nilaza tamiko fa tsy matahotra ny handray ny dingana amin'ny finoana sy ny fankatoavana ny sitrapon 'Andriamanitra no nanao. Ary Im 24 telo Kids sy izaho sy ny vadiko dia tena lalina eo amin'ny asa fanompoana amin'ny mozika. Andriamanitra no nanao ny zavatra sasany azo atao eo amin'ny fiainantsika ary tiako ny mandre fa ireo zatovovavy sy zatovolahy 'Andriamanitra saina fa Andriamanitra dia nanome ny fanahiny vady ho azy ireo sy deiced hanao ny fanapahan-kevitra tsara.
Ary cant hanadino, Nanambady an'i Josefa i Maria amin'ny 14 taona no ho Birthed an'i Jesosy, Izy sy ny virijina madio eo imason'Andriamanitra 'Andriamanitra. Noho izany Tompokolahy sy ny olona hijanona madio ho an'Andriamanitra mandra-U manambady!!!
Grabiel Rivera • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:04 aho • navalin'i
thats lehibe toy izany koa no nanjo ahy sy ny vadiko , aho 21 ary izy 18. avelantsika hitarika antsika Andriamanitra, ary ho eo amin'ny fanambadiana sy ankehitriny isika dia mampiseho ny asany eo amin'ny lifes sy eo amin'ny fanambadiana. Andriamanitra anie fitahiana foana Yah fanambadiana toy ny nataony tamin'ny andriamanitra hitahy antsika
Addis Hunter • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:04 aho • navalin'i
Misaotra anao noho ny fijoroanao ho vavolombelona, Afaka mitantara aminareo amin'ny fomba maro. Aho fa tsy maintsy hiaiky fa miady isan'andro “manana fanahy malemy sady miadana” Anisan'ny marrige..Like anao, Aho ary mbola be aho noroahina sy ny independant , ary ny fanekena ny vadiko tahaka ny lohan'ny ankohonany sy ny hanaiky ny hevitra (na dia I dont manaiky) no fanamby lehibe indrindra ho toy ny tanora vady. Mangataka amin'Andriamanitra aho isan'andro mba hanampy ahy hanetry tena sy submitt ny vadiko amin'ny zavatra rehetra. Misaotra anao nizara.
CY Hudson • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:04 aho • navalin'i
Ianareo ry zalahy no tsy mampino izany fitahiana ho tanora mpino! Tiako ireo bilaogy roa, ary misaotra an'i Jehovah noho ny rehetra izay niteny tamiko noho ny aminareo roa!
Jennifer Ann Mpivarotra • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:05 aho • navalin'i
21 taona, ary tsapako toa ianao milaza ahy. Aho fa tena manana Superwoman Syndrome. Misaotra betsaka noho ny fijoroana ho vavolombelona manentana ny fanahy, manome ahy fanantenana :)
Orinthea McKenzie • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:05 aho • navalin'i
Tena nampahery ahy ny fijoroana ho vavolombelona ity. Andriamanitra anie hitahy ny sendika
Pulemolise • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:05 aho • navalin'i
thnx alot Trip sy Jessica,olon-dehibe maro nid 2 jereo hay tanisana,M aho tena mampahery anareo ry zalahy,I Luv hw lafiny Ora hameno,-Trip Nihaona tamin'ny vehivavy araka an'Andriamanitra sy Jessica nihaona Nohazavain'ny mpanompon'Andriamanitra iray,Wow!(dats ny antony U nanana 2 hanambady,tpt!) ND thnk an'Andriamanitra isika 4 U ry zalahy,U hv aseho dat U afaka amin 'olon-dehibe matotra mbola kely Wen amin'ny olon-dehibe be taona cant taona evn mitantana ny ampahany amin'ny Wat enao R manao,big-dehibe 2 in,ND Andriamanitra anie hanohy 2 Ora bles fanambadiana bebe kokoa hatrany, isan'andro Deot avy
House Ewansiha • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:06 aho • navalin'i
Nahazo izany ny fomba fisainako momba betsaka
Simon Paoly ----- UK • Novambra 9, 2013 amin'ny 5:55 PM • navalin'i
Misaotra betsaka U Jessica apowerful fampaherezana toy izany .am 21 fa alwalys nihevitra mitombo dia midika hoe mifantoka amin'ny fifandraisana .Sorry nanenjika anao, Ve miaraka amin'ny olona ao amin'ny fifandraisana kristiana meanyou maintsy hanambady fa tena olona , na dia efa nahazo ny fifandraisana akaiky Ora rehetra mijery anao dont for..n te-hanisy ratsy ahy izy person..cos Uto manantena ho ny hubby …Ahoana no U hiatrehana izany loza?????thxx.
Kaila • Novambra 14, 2013 amin'ny 9:36 PM • navalin'i
Fantatro izany no nosoratana ny fotoana fohy lasa izay ary aho tamin'ny farany nahazo fahafahana hamaky izany. saingy, Heveriko fa io no fotoana tsara ho ahy ny mamaky azy io. Toa tahaka an'Andriamanitra foana mametraka zavatra madinika manodidina ny milaza amiko ny fotoana mba hametraka azy indray ny zavatra. Ary mihevitra aho fa tsy vitan'ny hoe ny fifandraisana miaraka amin'ny ankizilahy no mila Azy indray ny ao anatiny, fa izao mampiseho fa afaka manampy malefaka zavatra avy.
Izaho koa nahita fa mahaliana fa tsy nieritreritra ny fisainana toy ny Superwomen Syndrome, fa afaka mazava afaka miteny aho mila fanampiana miasa amin'ny ahy. Izay no sipako mamaritra ahy rehefa miezaka ny handray be loatra na pihetseham-po na ny asa hendry.
Colton • Febroary 10, 2014 amin'ny 5:00 PM • navalin'i
Hey Trip! Namaky ny amin'izay bilaogy, ary izy ireo (araka an'Andriamanitra miaraka amin'ny torohevitry ny fianakaviana sy ny namana) Efa nanampy ahy be tokoa tao anatin'ny volana vitsivitsy. Aho nihaona ny ankizivavy izay mahalala an'Andriamanitra no ho ahy ny hanambady, ary isika miandry fotsiny ny fotoana. Tena tena azo atao fa dia hiafara manambady ianao na dia talohan'ny, na, fara fahakeliny, avy eo amin'ny alalan'ny!
Inona no torohevitra omenareo ny olona iray izay any an fomba hafa rehetra vonona hanambady, afa-tsy ny fahafahana manome ny an-trano (satria manatrika amin'ny oniversite)?
Nadene • Mey 24, 2014 amin'ny 5:38 PM • navalin'i
Izany no tsara tarehy. Tsy milaza tena nilaiko izany :'). Hoe tena mahatoky!
Myles • Septambra 4, 2014 amin'ny 4:52 PM • navalin'i
Misaotra Jessica izay Andriamanitra marina tsy maintsy hihaino!
Femi • Febroary 21, 2015 amin'ny 1:34 PM • navalin'i
Misaotra noho ny fizarana Jessica. izany dia niova ny fomba fijery tokoa ny mampiaraka; tsy ny mamoha ny fitiavana ny fotoana alohan'ny. dope!
Lily • Jona 11, 2017 amin'ny 12:47 aho • navalin'i
Misaotra anao nizara ny traikefa sy ny fahendrena momba ny lohahevitra. Ny famakiana izany no nanampy ahy mihoatra noho ny fantatrao.